Poolisii Addaa Oromiyaa moo Janjaweed Oromiyaa. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsPoolisii Addaa Oromiyaa moo Janjaweed Oromiyaa.
Bara 2002 keessa Sudaan Daarfuur keessatti humni milishaa ummatatti roorrisu tokko dhalate. Maqaan isaas Janjaweed jedhama. Janjaweed jecha Afaan Arabaa lamarraa dhufe. Jinnii (Spirit) fi Jawad (Horse) jedhutu walitti dhufee Janjaweed ta’e. Mootummaan Sudaan qabsaa’otaa fi bu’uura deggersa falmattoota Daarfur rukutuuf jecha humna Janjaweed jedhamu fi Afaan Arabaa dubbatan hidhachiisee ummatatti bobbaase. Humnoonni Janjaweed jedhaman kun deggersa bal’aa mootummaa Sudaan biraa qaban fayyadamuun ajjeechaa suukanneessaa raawwatan, dubartoota gudeedan, ummata Daarfur nagaan qe’ee isaarra jiraatu buqqaasanii gama Chaaditti akka baqatu godhan. kana qofaa osoo hintaane gargaarsi baqattootaaf godhamullee akka hinqaqqabneef yakka namoomaa raawwatan. Gochaa isaanii kanaaf humni Janjaweed kun bara 2004 keessa sadarkaa addunyaatti yakka duguuggii sanyiin himataman.
Har’a Oromiyaa keessatti humna Janjaweed Milishaa irraa adda hin taanetu ijaarame. Humni kun maqaa Poolisii Addaa jedhamuun haa waamamu malee hojii fi gochi isaa waanuma Janjaweed Milishaan bara 2002 hanga 2004 tti ummata Daarfur irratti raawwate sana irra deebi’ee jira. Humni addaa Oromiyaa kun waan mirgi seeraa olii isaaf kenname fakkaata. Guutummaa Oromiyaa keessatti ummata ni reebu, mana namaa cabsanii seenanii maatii guutuu jilbeefanchiisanii namummaa isaanii salphisuun dararu, dargaggoota ni ukkaamsu. Tuffii isaan namaa fi seera biyya kanaaf qaban adda. Keessumaa magaalaa gurguddoo godinaa kanneen akka Buraayyuu, Amboo, Naqamtee, Gimbii, Dambi Doolloo, Ciroo, Roobee, Bulee Horaa fi aanaalee keessatti waan isaan raawwataa jiran nama suukanneessa. Har’a guutummaan Oromiyaa humna kanaan shororkaa’aa jirti. Garuu maaliif? Nagaa buusuuf moo ummata humnaan cabsanii, sodaachisanii afaan qawween abboomuuf?
Janjaweed Milishaan aangoo yakka sana hunda raawwachuu mootummaa Omar Hassan Al-Bashir biraa argate. Janjaweed Oromiyaa har’aa hayyama nama dararuu, magaalaalee shororkeessuu fi ummatatti roorrisuu mootummaa kallattii kanaan isaan leenjise, isaan hidhachiisee fi bobbaase boraa gonfate. Janjaweed Oromiyaa kun haala kanaan yoo itti fufan yakka namoomaa dhala Oromoof hin malle raawwachuun isaanii hinhafu. Naamusa poolisummaa dhabuu, naatoo fi marartee dhala namaa dhabuun akkasitti yoo itti fufan yeroo gabaabaa gidduutti dhiittaa mirga namoomaa hin tilmaamamne raawwatu.
Waan beekamuu qabau garuu, yakka namoomaa humni kun har’a raawwatuuf bor kan itti gaafatamu mootummaan bifa kanaan isaan leenjise, isaan hidhachiisee fi isaan bobbaase ta’uudha. Qaamni kamuu dhiittaa namoomaa raawwatuuf itti gaafatamummaa jalaa hin bahu.
ODUU OMN AFAAN OROMOO galgalaa Apr.22-2020/Ebl.14-2012
Covid-19: Malawi nurses go on nationwide strike over poor working conditions
In Malawi, nurses stage a walkout in hospitals across the country over working conditions amid fears they won’t be able to handle a spike in coronavirus cases. The strike comes amid divisions in the country over whether or not to implement a lockdown. Meanwhile in Nigeria, President Muhammadu Buhari has lashed out at bandits, who he says are taking advantage of the lockdown. Gunmen are responsible for at least 47 deaths in the north-eastern state of Katsina in recent days.
Dubartoota ulfa, dubartoota daa’imman hoosisan, maanguddoota gadamoojjii seenan walitti qabanii “Maatii Shanee” jechuun hidhu. Kun haala qabatamaa har’aati.
NAYIROOBII — Torbee darbe Gujii Bahaa aanotii gammoojjii afur keessaa poolisii Oromiyaan ka to’annaa jela oolfaman mana murtiif akka hin dhiyaanne jiraattonni Sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiran. Firoottan warra hidhaman kanaa, Sagalee Ameerikaaf yoo himan bakka waajjira poolisiittillee firoota isaanii gaafachuu sodaanneerraa jedhan.
(voaafaanoromoo)—Aadde Darmii Tukkisee jiraattuu aanaa gumii Eldalloo, ganda Caffee iddiiti. Aadde darmi abbaan warraa isaanii miseensa warra maqaa WBO’n socho’u ta’uu firri isaanii tokko Sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Torbee darbe waldhaansa baqaqsanii hodhuun erga daa’ima da’anii booda humna naga kabachiiftota mootummaan to’annaa jela oolfamanii Guyyaa afuriif daa’ima waliin waajjira poolisii Magaalaa Nageelle jiruu jedhu firri isaanii kun. Dabalaniis yoo dubbatan firri Aadde Darmii poolisii waan sodaanneef waan nyaatamuu fi uffatallee ijoolleedhaan waajjira poolisiitti erginaaf jechaaan himan.
‘Aanotii Gammoojjii Gujii Bahaa Keessati Namootni Hedduun Hidhamaa jiru’ – Jiraattota
“Akkaataan filannoo itti dabarsanii fi PP’nis seeraan ala” ~ Ob Tashaalaa Abarraa